Bangkok Airways Inozivisa Kumiswa kweBangkok - Samui Vols
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Bangkok Airways Inozivisa Kumiswa kweBangkok - Samui Vols
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Bangkok Airways inozivisa kumiswa kwe Bangkok - Samui ndege
Bangkok Airways Public Company Limited inodemba kuzivisa kumiswa kwenguva pfupi kwe Bangkok - Samui ndege kubva 21 Chikunguru 2021 zvichienda mberi.
Vapfuuri vanokanganiswa nekumiswa kwendege vanogona kubvisirwa fizi kuti vadzokerezve bhuku kana kukumbira kubhadharwa nenzira yevavhoti yekufambisa yetikiti remangwana.
Vapfuuri vanoshuvira kugadzirisa mafambiro avo vasina zuva idzva rekufamba vanokwanisa kuendesa chikumbiro chavo online mukati maawa makumi maviri nemana zuva risati ratarwa rekuenda.
Vapfuuri vakatsvaga matikiti avo kuburikidza nemasangano ekufambisa vanokurudzirwa kuti vataure zvakananga nevamiriri vavo kuitira zvimwe zvirongwa.
Zvinoenderana neChiziviso kubva kuCivil Aviation Authority yeThailand (CAAT) maererano nemirairidzo yevanoshanda nendege nevashandisi vemhepo munzira dzepamba panguva yechirwere cheCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Nha. 3), kuti vatevedze kudzivirirwa kwekutarisa mashandiro maererano nezvinodiwa uye mirairo yehurumende, Mari yezvikamu Bangkok Airways Public Company Limited kuzvidemba kuzivisa kumiswa kwenguva pfupi kweBangkok - Samui (vv) kubva 21 Chikunguru 2021 zvichienda mberi.
Pamusoro peizvozvo, ndege iyi inodawo kuzivisa kudzoserwa kweimwe nzira dzayo dzemumba idzo dzakarongerwa kutangazve pa1st waNyamavhuvhu 2021 kusvika kusvika pane chimwe chiziviso. Nzira dzakamisikidzwa dzinosanganisira: Bangkok - Chiang Mai (vv), Bangkok - Phuket (vv), Bangkok - Sukhothai (vv), Bangkok - Lampang (vv) uye Bangkok - Trat (vv)
Nekudaro, iyo yazvino Samui yakavharwa nzira, nendege dzinogarisa vafambi / vanoendesa vafambi vekunze, vanobatana kubva Bangkok (Suvarnabhumi) kuenda kuKoh Samui (3 nendege pazuva) dzichiri kushanda senguva dzose. Pamusoro pezvo, iyo Samui - Phuket nzira (vv) icharamba ichiwanikwa nendege ina pavhiki (Muvhuro, Chitatu, Chishanu neSvondo) kutsigira chirongwa chePhuket Sandbox chenyika.
Vapfuuri vanokanganiswa nekumiswa kwenguva pfupi kwendege vanogona kubvisirwa fizi kuti vadzokerezve bhuku kana neimwe nzira vangakumbira kudzoserwa muchimiro chevhavha yekufamba kuti ishandiswe kutikitikiti mune ramangwana. Vapfuuri vanogona kuita chero shanduko inodiwa kusvika maawa makumi maviri nemana vasati vatiza.
Vatakuri vanoshuvira kugadzirisa mafambiro avo vasina zuva idzva rekufamba (tikiti rakavhurika) vanogona kuendesa chikumbiro chavo online mukati maawa makumi maviri nemana zuva rekubva ratarisirwa. Ndege inozoshandisa ruzivo rwunopihwa kuburikidza neiyi fomu kuitira kuti ienderere mberi nekutakura vafambi.
Zvakare, iyo ndege inokurudzira vafambi kuti vatarise zviziviso, maodha, uye mafambiro maitiro, kwenzvimbo imwe neimwe isati yafamba kubva kuzviremera zvine hukama seizvi:
Iyo Center yeCOVID-19 Situation Administration (CCSA)
Bangkok Airways inokumbira ruregerero pamusoro pekukanganisa kwakakonzerwa uye nendege inoramba yakazvipira kuchengetedzeka uye hutsanana hwevatakuri vedu nevashandi sechinhu chakanyanya kukoshesa. Iwo ndege anoteedzera anocherekedza matanho ekudzivirira kupararira kwe COVID-19.